iPhoto, na-egbuke kpakpando nke iLife, bụ kediegwu foto ngwa-abịa tupu arụnyere na Mac OS X. iPhoto na-eme ka ọ dịkwuo mfe na-esochi nke dị oké ọnụ ahịa na-echeta, na-ahazi na-edezi ha, mbịne ha n'ime dị iche iche oru ngo ka ngosi mmịfe, foto-akwụkwọ , foto-kalenda, foto-kaadị na-ekere òkè ha site Facebook, twitter, wdg N'agbanyeghị nke gị mac ọrụ ọnọdụ, ị ga-mkpa oge ụfọdụ ina-eji iPhoto. Ebe a na-25 bara uru Atụmatụ na usoro nke ga-enyere gị aka ịghọ ndị kacha ike ọrụ nke iPhoto.
1. Full ihuenyo Image edezi
Iji nke a mma dezie oyiyi na ihuenyo zuru mode. I nwere ike ime nke a ụzọ atọ:
Nhọrọ 1: Họrọ a foto dezie. Na menu Bar họrọ Lee> Full ihuenyo na foto gị ga-eto ihuenyo zuru. Pịa Ụzọ Mgbapụ isi laghachi nkịtị mode.
Nhọrọ 2: Họrọ a foto dezie. Right-pịa ma họrọ "Dezie Iji Full ihuenyo".
Nhọrọ 3: Ị nwere ike ịtọ iPhoto na-akpaghị aka na-emeghe foto niile ị chọrọ dezie na Full ihuenyo mode. Iji mee nke a, na menu Bar họrọ iPhoto> Mmasị (ma ọ bụ pịa Wụk + rikoma). Họrọ General taabụ ma họrọ "Iji Full ihuenyo" site Dezie Photo dobe-ala menu.
2. Iji Smart Albums ka Nọgidenụ iPhoto Videos & Photos E wezụga
Mgbe ị na mbubata videos ka iPhoto, vidio ga-kposara na na niile photos. Ekele, i nwere ike iji Smart Album ikewapụ si na videos. A bụ otú:
Ẹkedori iPhoto na-aga Njikwa> New> Smart Album. Mgbe ahụ a window ga-egosi n'elu, na nke ị nwere ike melite iwu nke iPhoto ga idozi gị stof. Ebe i nwere ike dị nnọọ ịtọ achị dị ka "Photo bụ Movie" na-anakọta niile videos ke kiet ke otu album.
3. Mepụta na Jiri Multiple Libraries
Nke a na atụmatụ ga-enye aka mgbe ị na-emeso a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke foto. Nke a kemfe atụmatụ pụkwara inyere gị aka ikewapụ ezinụlọ foto na foto na ị na-n'ihi na ọrụ.
Ka ịmepụta ọbá akwụkwọ ọhụrụ, mgbe mmeghe iPhoto jituo Option isi. A ọhụrụ dialog ga-gbapụta arịọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhọrọ ọzọ n'ọbá akwụkwọ, ike a ọbá akwụkwọ ọhụrụ, ma ọ bụ họrọ ọzọ n'ọbá akwụkwọ (gụnyere ndabara) na iPhoto ama maara. Pịa Mepụta New na ezipụta a aha na-azọpụta ebe ke igbe na tụlee ala. iPhoto ga ugbu a Ibu Ibu na-egosipụta na ọbá akwụkwọ ọhụrụ. Ka ịgbanwee ọba akwụkwọ, jide nhọrọ isi na mmalite na pịa Ndị ọzọ Library button, ịnyagharịa ka ndị ọzọ n'ọbá akwụkwọ, wee họrọ Mepee.
4. hazie gị iPhoto Library
Mgbe mbụ ị na-emeghe iPhoto ị pụrụ ịhụ ụzọ dị iche iche hazie foto gị na dị nnọọ n'elu aka ekpe. Ị nwere ike ịhazi foto gị site na ihe, site ihu, site ụbọchị, site aha ọbụna site ebe ị gara.
I nwekwara ike hazie gị foto site na iji a Nchikota ọkọlọtọ na Keywords, nke ga-enyere gị aka ịchọta kpọmkwem foto site a otutu photos. Iji tinye a isiokwu, họrọ a foto, ma ọ bụ foto, na iPhoto, wee pịa ọ bụla nke Keywords. I nwekwara ike tinye gị onwe gị Keywords.
5. Photo Stream
Photo Stream bụ akụkụ nke iCloud na mmekọrịta gị niile foto ọnụ. Ọ pụtara na ọ bụrụ na ị na-ese foto na gị iPhone ma ọ bụ iPad ọ ga-akpaghị aka mmekọrịta gị na kọmputa. Ihe niile ị chọrọ ime bụ gbanye ya. Iji gbanye Photo Stream mkpa ka ị banye na iCloud.
6. Copy Pictures si iPhoto ka ọzọ nchekwa
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta ihe mbụ foto site iPhoto, ị pụrụ iṅomi ha ka ha na desktọpụ gị ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ site na-ahọpụta onye ị chọrọ na-adọkpụpụta & idobe ha jidesie ọ bụla na nchekwa.
7. Mee ka Image dị ka Desktọpụ Background
Ị nwere ike ịtọ ihe oyiyi si gị iPhoto n'ọbá akwụkwọ dị ka gị desktọọpụ akwụkwọ. Iji mee otú ahụ, họrọ ya na-aga Ekekọrịta> Mee Desktọpụ
8. Bipute Your Images dị iche iche na Borders, nzụlite na layouts
Ịnwere ike ibipute foto gị ma ọ bụ foto mfe na iPhoto. Họrọ foto ị chọrọ ibipụta. Mgbe ahụ gaa elu akaekpe File> Bipute. Ị ga-enweta nhọrọ dị ka ọkọlọtọ, kọntaktị mpempe akwụkwọ, otu ókè-ala, otu ute, abụọ ute. Họrọ onye na afọ ju gị mkpa na pịa ebipụta.
9. Mee a ngosi mmịfe nke gị Best Photos:
Ị pụrụ ime ka a ngosi mmịfe nke foto gị nnọọ mfe na iPhoto. Iji mee otú ahụ, nanị na-emeghe iPhoto, na mata otu ìgwè nke photos ị ga-amasị ike a ngosi mmịfe. Wee pịa na tinye bọtịnụ na họrọ ngosi mmịfe si ọzọ dobe ala menu. Wee họrọ ọhụrụ ngosi mmịfe. iPhoto ga-ahazi foto na a linear ndabere. Mgbe ahụ, tinye isiokwu na ijido music si iTunes n'ọbá akwụkwọ gị ngosi mmịfe-eme ka ọ pụtara ma na-enye a aha na ya. I nwekwara ike ịgbakwunye ụfọdụ mgbanwe mmetụta ndị mmadụ foto. Ozugbo ka edezi, pịa Preview button ịhụ gị ngosi mmịfe n'ime iPhoto window, ma ọ bụ Play ịhụ ya ihuenyo zuru. I nwekwara ike họrọ Export izipu ya dị ka a video faịlụ na a dịgasị iche iche nke formats.
10. Ihichapụ &-adịgide adịgide Iwepụ Photos na iPhoto
iPhoto nwere ya nnọọ onwe ahịhịa. Foto na ị ihichapụ si iPhoto aga a ahịhịa, na ọ gwụla ma ọ bụ ihe efu, ha anọgide na-ebi na diski ike gị. Nsị usoro ahịhịa na-nwere enweghị mmetụta na nke a. Efu iPhoto ahịhịa, ihe niile ị chọrọ ime bụ Control + Pịa na ahịhịa na akara ngosi na iPhoto sidebar, ma ọ bụ jiri Efu Mkpofu bọtịnụ na n'elu nri akuku, na ihe nile oyiyi ga-adịgide adịgide wepụ. Dị ka usoro ahịhịa, ị nwere ike ghara selectively wepụ ihe oyiyi ndị a.
11. Kwụsị iPhoto si launching mgbe Igwefoto jikọọ
iPhoto akwado importing ma na-ahazi foto site na gị igwefoto, na ọ ga-emepe oge ọ bụla ị jikọọ gị igwefoto. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji gbanyụọ a mma, na-aga iPhoto si mmasị, na site na Ijikọ igwefoto ga-emepe dropdown, họrọ Mba ngwa.
12. emepe Your iPhoto Library na Finder
Nke a na atụmatụ na-enyere aka ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-aga troubleshoot-ezighị ezi na iPhoto n'ọbá akwụkwọ. I nwere ike na-achọghị na-emetụ ihe ọ bụla a ma ọ bụrụ na ị bụ bụghị ọkà ezu dị ka ọ bụla mgbanwe mere nwere ike ghara ebudatara ma ọ bụrụ na-ehichapụ 'uwa mmadụ na mberede. Imeghe iPhoto ọbá akwụkwọ Finder, gaa na foto nchekwa, ị ga-ahụ iPhoto n'ọbá akwụkwọ n'ebe ahụ. Right-pịa ya, na site na onodu menu, họrọ View "ngwugwu ọdịnaya" ịbanye nnọọ machibidoro iwu iPhoto n'ọbá akwụkwọ. The "Nna-ukwu" nchekwa na-echekwa niile mbụ oyiyi. Ha na-ota n'ime sub-nchekwa n'ehihie, ọnwa na afọ.
13. Paghaa Library na ebe dị iche ma ọ bụ mpụga Drive
Na-akwaga ebe ahụ iPhoto n'ọbá akwụkwọ na-nnọọ mfe na iPhoto '11. Ị dị nnọọ mkpa ịdọrọ n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ ịkwaga na dobe ya na gị na chọrọ nchekwa ma ọ bụ mpụga mbanye. Tupu eme otú ahụ, jide n'aka na ị na-emechi iPhoto first.iPhoto ga-akpaghị aka aha mgbanwe oge ọzọ ị na ẹkedori ya.
14. mpikota onu & Resize ihe Image
iPhoto apụghị hazie n'ezie Raw oyiyi na-eji dochie ha na mbụ otu. Ma, ọ bụ omume na-mbupụ oyiyi ọ bụla na mpikota onu na resize ha. Gaa Njikwa> Export, zọpụta oyiyi na JPEG format na họrọ a mkpakọ larịị si JPEG Ogo dropdown. Site Size dropdown, họrọ omenala ma kọwaa obosara ma ọ bụ elu nke oyiyi na pịa Export. The image ga-abịakọrọ na resized. Mgbe e mesịrị ị nwere ike mbubata ihe oyiyi iPhoto na ihichapụ ibu otu.
15. Iji Oge Machine-eweta Back ehichapụ Photos
Ị nwere ike akpọghachite ehichapụ photos, albums, ihe ndị ọzọ si iPhoto ma ọ bụrụ na ị nwere oge igwe enabled.To anya n'ihi na ehichapụ ihe na iPhoto, nanị emeghe iPhoto ngwa na ẹkedori Time Machine si menu mmanya ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri. Mgbe ị na-eme, iPhoto ga-emeghe elu na Time Machine interface, ime ka ị chọọ ehichapụ ihe. Pịa otu ihe ma họrọ Weghachi iji weghachi ya na gị na ugbu a iPhoto n'ọbá akwụkwọ.
16. jikota Iketịbede
Omume photos nwere ike kewaa elu n'oge ibubata n'ihi na ọ bụrụ metadata. Ka jikota abụọ ma ọ bụ karịa ihe dị mkpa ka ị jide nnofega na họrọ ihe ndị na-aga ọnụ, mgbe ahụ, nri-pịa ma họrọ "jikota Iketịbede." I nwekwara ike ime nke a site na-adọkpụpụta otu album n'ime ọzọ.
17. ịgbanwe Key Photo na Album
Ị nwere ike ịgbanwe foto na-anọchite anya otu ihe mere na Iketịbede ndepụta. Nke a foto a na-akpọ isi foto, ma ị nwere ike ịgbanwe nke a site na-ahọpụta a foto nri-na ịpị a foto na-ahọpụta Mee Key Photo mgbe n'ime ihe omume.
18. Kwenye Multiple Faces ozugbo
Ihu nke bụ a nnọọ uru ụzọ hazie ọ bụla foto nke a akpan akpan onye gị iPhoto n'ọbá akwụkwọ, ma ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egbu mgbu iji họrọ ọ bụla otu Face otu otu. Anyị nwere ike họrọ multiple Faces site navigating onye Faces ị chọrọ iji gosi, mgbe ahụ, na ebe kpọrọ "Onye nwekwara ike ịbụ foto n'okpuru," ịdọrọ a igbe gburugburu foto na ị chọrọ nkwenye. Mgbe ahụ, họrọ Kwenye aha button na ala toolbar.
19. Tinye ebe Ozi Iji aka
Ị nwere ike tinye ozi ọnọdụ aka site ụzọ atọ: site album / omume, site foto, ma ọ bụ site na otutu photos. Mgbe ị na òké n'elu ala-nri akuku nke ihe omume, album, ma ọ bụ foto ị hụrụ obere "m." Na ịpị a ga-eme ka a mmapụta panel nke ga-ekwe ka ị ezipụta metadata ozi dị ka ọnọdụ. Pịnye na a obodo na ọnọdụ ubi na iPhoto ga-achọ ka ịchọta ọnọdụ gị. Mgbe agbakwunye ozi ọnọdụ, họrọ Emela ịzọpụta. Ị nwere ike họrọ multiple photos, albums ma ọ bụ ihe ịgbanwe ọnọdụ.
20. Dezie Images Akụkụ-na-n'akụkụ
Ọ bụ omume dezie multiple oyiyi n'akụkụ-na-n'akụkụ. Nke a na atụmatụ na-enye aka na-etinye mmetụta yiri nke ahụ photos. Iji mee otú ahụ, nanị họrọ abụọ ma ọ bụ ọzọ foto na album wee họrọ Dezie button na ala toolbar.
21. Nzọụkwụ Site mmetụta
iPhoto na-enye ọtụtụ mmetụta na ike ose elu gị edezi .. mmetụta ndị a na-agụnye Black na White, ochie, Edge blurs na ndị ọzọ. Ị nwere ike itinye mmetụta site na-ahọpụta mmetụta bọtịnụ na ala nke edit panel. Ị nwere ike tinye multiple mmetụta site na-ahọpụta multiple mmetụta. I nwekwara ike ịgbanwe mmetụta osisi ike.
22. Zoo Photos
I nwere ike zoo ụfọdụ photos ị na-achọghị na-egosi onye ọ bụla. Zoo a foto ma ọ bụ ìgwè nke foto, họrọ ha na gị ọbá akwụkwọ na nri-pịa iji họrọ "Zoo Photo".
23. Share on Facebook, Flickr, na MobileMe
iPhoto-ahapụ gị ịkọrọ gị photos na MobileMe, Facebook, ma ọ bụ Flickr. Ịkọrọ gị album na Facebook, họrọ otu album, ihe omume, ma ọ bụ ìgwè nke foto, wee họrọ Facebook aka nri nke na ala toolbar. Ọ bụrụ na ị na-ama banye n'ime Facebook, a window ga-akpali ka ị họrọ gị nkekọrịta nhọrọ.
24. Melite mpụga Photo Editor
Mgbe ụfọdụ iPhoto wee ghara izute mkpa nke a dị ike edezi ngwaọrụ. Nke a na atụmatụ-enyere gị aka idezi foto gị ọzọ edezi ngwaọrụ dị ka Adobe Photoshop ma ọ bụ ndị ọzọ na edezi ngwaọrụ.
Iji mee nke a, isi iPhoto> Mmasị (ma ọ bụ pịa Wụk + rikoma). Na General Tab, n'okpuru Dezie Photo, e nwere atọ nhọrọ: Dezie na Main Ohere, Dezie Iji Full ihuenyo, na Dezie ọzọ Ngwa. Anyị ga-ahọrọ Dezie na Ngwa. A dialog window ga-gbapụta-akpali gị maka ngwa nke gị nhọrọ; ịnyagharịa ngwa ma họrọ Mepee.
25. Copy / Paste ọnọdụ Otu Multiple Photos
Ị pụrụ nanị idetuo otu foto si ozi ọnọdụ na mado ya ndị ọzọ foto ma ọ bụ foto. Iji mee otú ahụ, nanị idetuo (Wụk + C) ọ bụla foto inwe ọnọdụ. Wee họrọ multiple photos nke na-eweta otu ọnọdụ na nri pịa> Tapawa ọnọdụ.
Top 10 Bara Uru iPhoto Plugins
Olee otú Zọpụta Video si iMessage ka a Windows Computer ma ọ bụ a Mac
Olee otú Download Howcast Videos na a Click
Olee otú Play WMA on Nexus 7 Tablet
Olee otú Tinye SRT ka MKV
Get a Free AVI Ntụgharị enweghị Watermark
> Resource> Video> Best Atụmatụ & Aghụghọ-aghọ Ike ọrụ nke iPhoto '11